Kusukela kwamukelwa ubukhosi Belarus amanothi sihlangabezane umlando okuthakazelisa kakhulu. Kulesi sihloko uzofunda ngalokho ngendlela esidlule imali Belarusian kusukela ekuqaleni khona ezimele yezwe kuze kube namuhla, ezibhekwa amaqiniso ethakazelisayo lwemali unikezwa, ukuzinza iyunithi yemali, izinkomba ezithinta kwato, nezindlela okufanele asize.
Ngisho nangaphambi kokuba wokugoqa wase-USSR ku isi-Byelorussian SSR basungula uhlelo ukudala lwemali ayo kazwelonke. Kodwa lutho ezinhle akuyona kwaholela abantu abayizigidi, njengoba nenkinga esibi sezomnotho ezweni. Naphezu kwakho konke lokhu, emva kwesikhathi esithile lwemali sidalwe futhi kuvunywe zonke izifunda zomhlaba. ekuqaleni imali yemaphepha Belarus wafuna ngokuthi "Taler", ngoba kwaba igama uhlamvu lwemali eJalimane Ephakathi. Kodwa abantu akazange avumelane ngaleli gama, ngoba igama "Bunnies" sisetshenziswa kabanzi kuleli zwe.
imali siqu Belarus eseqala ukuveza ngokoqobo ngokushesha ngemva yokufuna ubukhosi. Ngonyaka olandelayo, ngemva kokuwa eU.SSR ngo Belarus uvele amakhuphoni, futhi ngemva kwezinyanga ezimbalwa, ngo-May, uhulumeni wasungula uhlelo amathikithi ebalisisiwe. Konke lokhu kunezimali sisetshenziswa ezweni lonke, kanye ruble. Belarus Uphawula zingahlanganiswa, isibonelo, ukukhokha ingxenye yemali ukuthenga ayengakwenza ruble, kanti enye ingxenye besebenzisa amakhuphoni.
Kodwa engenamali cishe akukho inzuzo, konke egcinwe kwi-akhawunti ye-elekthronikhi. Khiqiza ngisho izibalo, kusetshenziswa i-ruble Russian kwakungavunyelwe.
Ngo-1993, izimali zisusiwe ukukhiqizwa. Manje Belarus imali baba iyunithi olusemthethweni yemali yezwe, okwakubizwa ngokuthi i-ruble. Nokho, lezi zinguquko ezinhle ngizile ezimbi. Futhi iye yabathinta izakhamuzi ezivamile isimo. Izinga lokwehla kwamandla emali eqala ukuqhunyiswa, ruble liwa ngo ngokuziqhathanisa nomunye amayunithi yezwe. Lokhu kuboniswa yilokho isibonelo: ekuqaleni 1994 ruble kwaba mayelana 3,800 onogwaja, futhi ekupheleni kwalowo nyaka, kule nombolo zazilingana 10,000.
Lokhu kwaqhubeka kwaze kwaba sekupheleni nineties kwekhulu lamashumi amabili. Ngakho ngonyaka olandelayo, i-dollar angizisoli mayelana ruble 12,000. Lapho sekusele cishe unyaka leli nani ishintshile kancane. Kodwa ngasekupheleni konyaka ozayo sibalo rose ruble 3,000. Belarus waqala ziqhubekele imali, abantu ngokuphuthumayo esifushane izimali sokuba khona amacala anda ukuhlaselwa nokuphanga, ukukhwabanisa.
Vele 2 iminyaka dollar exchange rate kuya ruble Belarusian isibe intolerably okusezingeni eliphezulu. Omunye dollar akhiwa 320.000 ruble Belarusian. Ngakho-ke, uhulumeni wanquma ukuzinika ubambe ihlelo bese ukhipha imali yamaphepha entsha. Ngalesi sikhathi, abantu baye bazibonela nesimo esibucayi yangempela futhi sibona Ukwesabeka kwakho okwenzekayo. Izwe ngenkuthalo, baqala ukusebenzisa amadola, amanothi kazwelonke kanye zemali e Belarus cishe walahlekelwa ukubaluleka kwayo.
Ngo-2000, uhulumeni futhi aphethwe ehlelweni ukuthi kuzonciphisa kwenani eliyimali banknotes ezikhathini 1000. Design amanothi azizange zishintshe, izithombe ezanyatheliswa kubo, ayizange ithuthuke. Esinye kwaba umbala lwemali kuphela. Futhi, amasha ayishumi-bill, elalisendlini emuva yezwe kuze 2013.
Ekuqaleni zero uhulumeni unqume ukukhipha amathikithi ezilinganisiwe 10, 20 no-50 eziyinkulungwane ruble. Kusukela ngo-2004, kancane kancane baqala ukuvela kusuka kwegazi zemali amahlelo ruble 1 no-5.
Kodwa akunjalo kudala, ngo-2016, imali ewuhlweza banknotes e Belarus waphinda zabhekana ihlelo lezikhathi 10,000. Ngakho, izwe usebuyele amazinga eyedlule.
Belarusian iyunithi yemali seyaziwa ngokuthi Bunnies ngoba ngo-1992, udedelwe bill ne isithombe unogwaja ethathwe incwadi Soviet mayelana nezilwane kanye nezinyoni. Kamuva, gray hare waqala ukukhipha nezitembu zezikhumbuzo.
imali yamaphepha okusha kanye zemali naseBelorussia behlupheka ngokuvamile KuFundZa. Ngokwesibonelo, imali eyiphepha 500-ruble-anikezwe yakhishwa ngo-1992 lapho zonke izimpawu benziwa ngolimi Belarusian futhi isiqubulo ohlangothini front kulotshiwe ngesiRashiya. amanothi ezinjalo ezibalulekile kakhulu ngalesi sikhathi.
Ngo-1992 wakhishwa incwadi ruble 500, kwaba isithombe ibhere zinhlobo American black bear. Into ezithakazelisayo wukuthi lolu hlobo ongakaze umbone ensimini weRiphabhulikhi Belarus.
Izinkomba iyunithi ukuzinza
Usayizi izikweletu zangaphandle.
ubudlelwane Political ne amazwe CIS.
Izindlela ukuxazulula inkinga
Lwemali anikezwe ezweni unomphela, okubonisa ukuthi ukuntengantenga lwemali. Ukuze inkinga yayingabalulekile kunjalo, kubalulekile ukuba ezimeleyo kanye yokuthuthukisa ubuhlobo bethu emazweni - omakhelwane ye-oda kuqala.
Naphezu kweqiniso lokuthi iyunithi wezwe yemali kushintsha njalo, le imali yamaphepha ekhona Belarus babe ukufana okukhulu ne ukusikeka nineties kwekhulu elidlule.
Mark umlando German kanye nohlobo amanothi
Ingqikithi imali ezweni lanamuhla
Oman Imali: Omani Rial
Ungaphendula kanjani futhi nini ukuqoqa birch ubisi
Porsche Panamera Turbo - nezemidlalo ibhizinisi super imoto noma itekisi umgibeli
Awazi kanjani ukudweba cube? Lesi sihloko ukuphi!
Eziphakeme Dizzy ka-Mount Everest
Izidakamizwa "Grippferon" ngesikhathi sokukhulelwa, 1 yokuthathu: izici isicelo, imiyalelo kanye impendulo
Indoda ehlambalaza ubuso bukaBuddha: umfanekiso wefilosofi
Vitamin B1: isicelo. Ukudla aqukethe uvithamini B1
Kusukela sizogqokani leggings ekwindla: Izincomo
Iphepha baking dish. Amathiphu Ukusetshenziswa